Ra’iisul Wasaare Cabdiweli iyo Uhuru Kenyatta oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dawladood . | Codkamudug.com	Home
Sunday, June 22nd, 2014 | Posted by cabdulahi Ra’iisul Wasaare Cabdiweli iyo Uhuru Kenyatta oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dawladood .
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed, oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Kenya, ayaa maanta kulan booqasho ah oo qaatay saacado badan la yeeshay Madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta. Waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen arrimo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee dhinacyada siyaasadda, ammaanka, ganacsiga iyo arrimaha bulshada.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa uga warramay Madaxweyne Kenyatta horumarrada siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka socda dalka Soomaaliya, isagoo ammaanay kaalinta ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM kaga jiraan sidii guud ahaan dalka looga xorayn lahaa kooxaha nabad-diidka ah.
Ra’iiusl Wasaaruhu wuxuu Madaxweynaha Kenya uga tacsiyeeyay weerarkii ka dhacay deegaanka Mpeketoni ee Lamu oo lagu qaaday dadka rayidka ah iyo saldhigga booliska. Wuxuu sidoo kale, isagoo tixraacaya inay shalay ahayd Maalintii Qaxootiga Adduunka, uga mahadnaqay dadka Kenya sida ay qaxootiga Soomaaliyeed ugu soo dhoweeyeen Kenya dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay.
“Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo walaalo ah. Waxaa naga go’an inaan sii xoojinno xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada badan ah ee u dhexeeya labadeenna dal. Waxaan uga mahadcelinayaa dawladda Kenya sida ay noogu garab taagan tahay inaan hagaajinno amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Waxaan Madaxweyne Kenyatta ka wada hadalnay arrimo badan oo danaha labada dal ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin sidii aan u fulin lahayn heshiiskii saddex-geesoodka ahaa ee la gaaray. Waxaan dooneeynaa inaan hore u sii wadno xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal, isla markaana aan iska kaashanno dadaal walba oo danta gobolku ku jirto,” ayuu yiri Ra’iiusl Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
Dhiniciisa, wuxuu Madaxweyne Uhuru Kenyatta sheegay in uu ku faraxsan yahay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay, isagoo ballan qaaday in ay dawladdiisu ku dadaaleeyso sidii ay u taageeri lahayd horumarkaas una xoojin lahayd iskaashiga labada dal. Wuxuu intaa raaciyay in dawladdiisu ay dhowaan si rasmi ah safaarad uga furan doonto magaalada Muqdisho.
“Kenya iyo Soomaaliya waa walaalo waana saaxiib, waxaa naga go’an in aan sii xoojinno xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dawladood. Si taa loo sii hagaajiyo, waxaan dhowaan magaalada Muqdisho dib uga furi doonnaa safaaraddeenii. Shacabka Kenya iyo Soomaaliya waa dad isku mid ah oo dano fara badan ay ka dhexeeyaan. Waan sii wadi doonnaa inaan garab taagnaanno shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed, mana jiri doonaan caqabado naga hor istaagaya in aan si wadajir ah uga hortagno kuwa khatarta ku ah amniga labada dawladoodba,” ayuu yiri Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Dhagayso+Sawiro:Shirweynaha Midnimada iyo Horumarinta Beesha Sacad oo Gaalkacyo Ka Furmay iyo Qodobo Xasaasi Ah oo Kasoo Baxay
Dhagayso:Xildhibaan Ka Tirsan Galmudug oo Fariin udiray Puntland
Dhagayso:Ciidamadii Isku dhafka Ahaa ee Gaalkacyo oo Tababarkii Loosoo Xiray
DF oo ka hadashay iska hor imaadyadii maanta ka dhacay Muqdisho
Gaalkacyo: Waxgarad u Digey Maamulka Puntland
Barlamaanka Galmudug: Mooshin iyo Mushaar